SOOL, SANDULE IYO SIILAANYO | Salaan Media
SOOL, SANDULE IYO SIILAANYO
Maalmo yar ka hor uun bay ahayd markaan ku waabariistay Madaxweyne Siilaanyo oo xilalkii ka qaaday xubno kooban oo Wasiiro ah, halka uu kuwo kalena kala bedel ku sameeyey, balse waxaan goobta ka milicsaday xilal Cusub oo qaarkood tilmaamayeen Xil Wasiir balse deegaamo kooban u ah Wasiir. Xilalka aan aadka ula yaabay ayaa waxaa ka mid ahaa Wasiiru-Dowlaha Horumarinta iyo Nabadaynta Gobolada Bari, kaas oo loo magacaaba Cali Sandule oo deegaamadaas Bari ka soo jeeda.
Waxaa is-weydiin leh waa maxay Xilkani ma Badhasaab la laba-jibaaraybaa, maanan fahmin xaqiiqo ahaan. Xilka Wasiir sida la yaqaano waa Xubin wakiil ka ah Waddankoo dhan Sida Wasiiru-Dowlaha Horumarinta iyo Nabadaynta Waddanka, balse Beel loo sameeyo Wasiir ma garan karo macnaha ka dambeeya. Hadaanse dhanka kale ka eego sida xaqiiqadu tahay xukuumadan hada jirtaahi waxweyn kamaysan qaban siyaasadaha Gudaha iyo Dibadaba waana tan keentay Culayska siyaasada Dibada ee hada Waddanka haysta iyo hoos u dhaca Siyaasadii Gudaha oo Beelo iyo shirar Beeleed inagu celisay halkaynu Qaran midaysan higsanaynay.
Waa taloobo yididiilo leh isbedelka xilalka Gudaha iyo Dibaduba, sidoo kale Arinta Gobolada Bari waa wax loo baahnaa xili horeba. Waa xaqiiqo in Hubka iyo Ciidanka aad loogu rooraan jiray Goboladan balse dhinacyada Horumarinta iyo Nabadaynta aysan xukuumadani Qalbigeeda u daadejin oo waynu ognahay Inta Mashaariic Goboladan laga fuliyey inay aad uga hooseeyaan dhamaanba Gobolada kale ee Waddanka, Dhinaca Nabadayntana waxaad ka garan kartaa halka maanta Goboladii Bari xaalkoodii joogo taas oon filayo inay keentay qaabka siyaasadeed ee xukuumadan ee ku wajahan Goboladan. Waxaa xusid mudan in Nabadayn ay ka soo shaqeeyeen Beesha aan ka soo jeedaahi ka hanoqaadi weyday dhinaca Xukuumadan hada jirta.
Isku soo wada-duub, Xilkan Wasiir Sandule ma noqon doonaa mid xukuumadu ugu diyaar garowday inay Maalgelin balaaran ugu samayso Goboladan Bari ka dibna Cabashadooda wada-hadal kala furto inlayn waynu ognahay in “Faro aan Dufan lahayni Jidh Duugine”, Mise waa maqaarsaar iyo Magac u-yaal la filayo in lagu qanciyo oo qudha Ururkii Sandule ka soo jeeday ee Xaqsoor, Sandulena looga dhigo Maararow.
Waxaan Qoraalkan ku soo af-meerayaa arimo aan u arko Talooyin wax-tar ah:
1) Waa in xukuumadu Qalbiga u furto Gobolada Bari, Maalgelin Balaadhan oo Waxbarasho, Caafimaad iyo Biyo-gelin lehna ka samayso Tuulo walba oo deegaanka ka tirsan, iyadoo la dhinac wado Nabadayntii oo dadka deegaanka lagala shaqeeyo sidii loo gaarsiin lahaa loona tusi lahaa kalsooni nabadeed.
2) Waxaan kaloo Talo u arkaa in Wasiir Ali Sandule ogaado waxa loo doortay inuusan dalkoo dhan ahayn balse uu deegaan kooban yahay, waxuu ka qabtana lagu qiimayn doono xag Horumarineed iyo Xag Nabadeedba oo ah Xialalka loo magacaabay, Waxaan ka digayaa inuu noqondo nin Xilkiisa iyo Mushaharkiisa ku qanacsan oon Hargeysaba soo dhaafin.
3) Madaxweyne Siilaanyana waxaan leeyahay Gobolada Bari waxaad ku abuurto ama ku beerto ayaad dib uga guran doontaa, Hadaad Hub iyo Ciidan ku abuurto iyaguun bay dhali, Hadaad Waxbarasho, Caafimaad iyo Nabadayn ku abuurtidna kuwaas uun baa ka soo bixi oo laga guran.
Qasim Adam Suleiman